Unchme nri ụtụtụ Clamshell kwesịrị ịdị na-abụ ndị enyi karịa gburugburu ebe obibi
Onwere ihe na akwu akwu osisi?
Nke ahụ bụ okpete okpete! Mpempe okpete bụkwa ụdị ụdị akwụkwọ mmịpụta akwụkwọ. Ọ na-eji okpete akpa ya dị ka akụrụngwa ma na-akwado ya site na iku ume hydraulic na mmanu nke okpomoku di elu maka itinye uche. Ọ bụrụ na ị na-achọ plastik a na-ere kpamkpam, mgbe ahụ shuga okpete a ...
Ihe Mere Inye Pulp tableware na Bagasse Dị Sayensị Karịa Ọkụ ...
A na-agbaze akpa cane bagasse ọkụ dị ka mmanụ, ma ọ bụ wepụta eriri osisi na bagasse dị ka akụrụngwa tebụl ma gbanwee mkpụrụ ndụ ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ n'ime ume ọkụ bara uru karị nye ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi? Na-agbanyeghị akụkụ nke ike, njikwa akụ rụọ ọrụ ...
Gịnị bụ Mkpụrụ Osisi Pulp?
Ugbu a karia imirikiti gburugburu ebe obibi, ahịhịa pulp tableware, shuga pulp tableware, ahịhịa pulp tableware, achara pulp tableware, na ọbụna kraft akwụkwọ ofe bọket, wdg. Na gburugburu ebe nchekwa tableware na nnukwu ahịa, ọtụtụ ndị ahịa anaghị eme mara Iji di ...
Kedu ihe kpatara Sugarcane Bagasse?
Agbanyeghị na enwere ike ịgaghari maka iji otu eji eme ihe oge ọ bụla n'oge na-adịghị anya, ihe ndị a na-eji arụpụta ihe ndị a nwere ike ime ihe niile na ụwa. Styrofoam na plastik ka bụ ihe dị ọnụ ala ma dị mfe ị nwere ike ịkwakọ ngwaahịa, mana enwere nhọrọ biodegradable availa ...